Sida Ilmahaagu u Joojiyo Soojiidashada Waxay kuxiran tahay Qalabka Ciyaaraha Caruurta | GFUN
Sida Ilmahaagu u Joojiyo Soojiidashada waxay kuxiran tahay Qalabka Ciyaarta ee Carruurta
Ma ogi sida loogu hawlgalo qalabka ciyaarta carruurta? Tani waa dhibaato soo food saartay macmiil badan oo hadda soo galay ganacsiga. Waxaa jira meherado badan oo macaamiisha ka jawaab celiya oo aan u fiicneyn sida ay u maleynayaan. Xaqiiqdii, kani maahan arin qalab ah.
Haddii aan dooranno habka maareynta saxda ah, waxaan si weyn u ballaarin karnaa dakhligeenna. Qaliinka qalabka lagu ciyaaro caruurta wuxuu ahaa dhibaato weyn. Sida ganacsiga, haddii aadan qibrad lahayn, ma ogaan kartid sababta ay aaladaha isku lacag ku sameysan karaan isla jawiga.
Kani waa doorashada habka ganacsiga. Hadaad rabto inaad maamusho qalabkaaga madadaalada, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid goobtaada iyo dadka kugu xeeran. Markii aad dooraneyso iibsashada qalabka ciyaarta carruurta, dooro qalabka ku habboon goobta. Waxay u shaqaysaa dadka ugu badan duurka.
Maskaxda ku hay in qalabka ciyaarta uusan keliya carruurta u aheyn. Qaababka loogu talagalay carruurta ee aaladaha lagu ciyaaro qalabka, marka loo eego goobahooda iyo qalabka ay soo iibsadeen qorshaynta. Waxay kuxirantahay masaafada, waqtiga iyo tirada dadka. Suurtagal ma ahan in si indho la’aan ah loo yiraahdo waxay sameyneysaa lacag.
Tani muddo-dheer maahan.
Haddii aadan runtii aqoon sida aad u shaqeyso ama aad ugu shaqeyso si habsami leh, waxaan u qorsheynayaa habab maareyn oo faahfaahsan goobtaada, dad badan iyo qalab si wax looga qabto welwelkaaga! Qalabka ciyaarta carruurtu waxay kicin karaan xiisaha carruurta muddo dheer. Carruurtu had iyo jeer way jecel yihiin waxkasta, waxyaabo cusub ayaa u soo jiita iyaga, iyo sida loo sii wado jiidashadaas waxay kuxirantahay raacitaanka.
Tusaale ahaan, qalcadaha dhagxaanta leh ee carruurta, oo ay ku jiraan alaabo kala duwan, waaweyn iyo mid yarba, carruurtu waxay yeelan doonaan faham kala duwan mar kasta oo ay ciyaaraan, way fududahay in lagu soo jiito inay ciyaaraan marar badan. Jawiga ciyaarta waa amaan. Amniga ayaa had iyo jeer ahaa arin bilow ah. Haddii ay jirto arrimo nabadgelyo oo ku saabsan qalabka ciyaarta cunugga, lama hawl geli karo. Sidaa darteed, marka aad maal gashanayso safaaradaha, waa inaad doorataa soo-saare u qalma inuu iibsado raacitaanno run ah oo aamin ah.